यस्ता हुन्छन् रेबिजका लक्षण, कसरी बच्ने ? « Mero LifeStyle
मेरो लाइफस्टाइल	|| 28 September, 2021
रेबिज बौलाहा पशुको टोकाईबाट मानव र अन्य स्तनधारी प्राणीमा सर्ने अति नै डरलाग्दो प्राणघातक रोग हो । यो एक जिनोटिक रोग हो अर्थात्, पशुबाट मानिस र मानिसबाट पशुमा सर्ने गर्दछ । स्तनधारी सबै पशुहरुमा यो रोग लाग्न सक्ने र अरुलाई सार्न सक्ने भएतापनि मुख्यतया कुकुरको टोकाईबाट यो रोग लाग्नेहरुको संख्या धेरै छ ।
नेपालमा सरकारले रेविज रोगविरुद्ध लाखौं खर्च गरेर विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै आएको छ । तर सरकारले लाखौ खर्च गरेपनि रेबिजका बिरामीहरुको संख्यामा भने कमी आएको छैन । नेपालमा वर्षेनी औसतमा १२ जनाको रेबिजकै कारण मृत्यु हुने गरेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुन बताउँछन् । यद्यपि, यो तथ्यांकभन्दा धेरै व्यक्तिहरुको रेबिजका कारण मृत्यु हुने गरेको पुनको दाबी छ । ‘केही वर्षको तथ्यांकहरु हेर्दा कुनै वर्षमा ३० जनासम्मको पनि यो रोगबाट मृत्यु भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो त हामीले थाहा पाएका तथ्यांक मात्र भयो, धेरै जना त लक्षणहरु देखिएर पनि त्यस्को बेवास्ता गरेर थाहा नै नभई रेबिजकै कारण मृत्यु भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।’
के हो रेबिज कसरी सर्छ ?
रेबिज एक किसिमको भाइरसले लाग्ने रोग हो । रेबिज लागेको कुकुर, स्याल वा अन्य जनावरमा रेबिज भाइरस हुन्छ । कुकुर, स्याल, चमेरो, बिरालोलगायत तातो रगत हुने र स्तनधारी जनावरबाट रेबिज भाइरस सर्ने गर्छ । त्यस्ता जनावरले टोकेपछि घाउका माध्यमबाट रेबिज भाइरस शरीरमा प्रवेश गर्छ । जसले गर्दा मानिसमा रेबिज रोग लाग्छ । र, छालामुनीको भित्री तन्तु र मांशपेशी हुँदै स्नायु, मेरुदण्ड र मस्तिष्कसम्म पुग्छ । मस्तिष्कमा संक्रमण भएपछि मात्र विशेष लक्षणहरु देखिन्छन् । यस्ता संंक्रमित जनावारले टोक्दा र्याल ग्रन्थिमा भएको भाइरस फेरि अर्काे जनावारको शरीरमा प्रवेश गर्छ ।
– घाउ भएको स्थानमा दुख्ने
– झम्झमाउने, पोले जस्तो हुने
– ढाड दुख्ने
– भाइरस मस्तिष्कसम्म पुगेपछि मस्तिष्क तथा स्नायुहरु सुनिने
– पानीदेखि डराउने
– हावाको चालबाट तर्सिने
– रेबिजको भाइरस हुने सम्भावित जनावरले टोकेपछि तत्काल साबुनपानीले घाउ सफा गर्ने ।
– जतिसक्दो चाँडो अस्पताल पुर्याई रेबिजविरुद्धको खोप लगाउनु उपयुक्त हुन्छ । कुकुरले टोकेपछि छिटो भ्याक्सिन लगाउँदा भाइरस धेरै फैलिन पाउँदैन ।